Qaxootiga mushaar hoose ha lagu shaqaaleeyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qaxootiga mushaar hoose ha lagu shaqaaleeyo
La daabacay fredag 22 januari 2016 kl 13.34
Iskaashatada shaqaalaha iyo shaqobaxiyasha waa in ay masuuliyadooda qataan si qaxootiga shaqo uga helaan suuqa shaqada Sweden.
Sidaas waxaa ku taliyey guddoomiyaha guddiga siyaasadda dhaqaalaha, dhaqaaloyahan John Hassler. Waxuuna qabaa in dhinacyado ay gaaraan heshiish gaar ah oo dadyowga aan xirfaddaha laheyn fursad u siinaya in lagu shaqaaleeyo mushaaro hooseeysa.
– Waxaan aaminsanahay in loo baahanyahay in sameeyo heshiis u suurogelinaya dadyowga xirfadooda hoseyso oo aan wax waayo-aragnimo ah u laheyn suuqa shaqada in laga shaqaaleeyo mushaaro hooseysa, ayuu John Hassler.
Soo qatarta ma ahaan karto in suuqa shaqada uu ka abuurmo farqi mushaarooyinka haddii dadka qaarkood mushaarkooda hoos loo dhigo?
– Haa, laakiin waa in aan runta wajahno, waxaa waddanka soo galaya dadak xirfadooda shaqo iyo wax soo saarkooda aah u hooseyso.
Doodda la xiriirta mushaarooyin hoose dadka lagu shaqaaleya ma ahan mid cusub, laakiin qaxootiga faraha badan ee dalka soo galaya ayaa doodan dib u soo cusbooneysiisay.
Goddoomiyaha guddiga siyaasadda dhaqaalaha John Hassler ayaa aaminsan mushaarooyinka iyo canshuuraha laga qaado shaqo baxiyaasha kalobar laga dhimo shirkadaha shaqaaleeya shaqsiyaadka tacliinta hoose ee Sweden soo galaya.
Mohammad Tariq Sarwari oo asaga oo dhawaan ka yimid Afghanistan tacliina sarena ayuu waddankiisa kalo yimid, waxuuna qorsheynayaa in uu waxbarashadiisa jamacadeed ka sii wato Sweden, waxaase muuhimad u leh shaqo Sweden in uu ka helo si kastoo uusan mushaarka u wanaagsaneyn.
– Micno iima leh shaqadu in ay mushaar sare leedahay ama mid hoose. Waddankeyga Afghanistan waxaa ku heystay shaqo mushaar saro leh laakiin nabadgeliyo kuma heysan. Ma ila ahan murshaarka mid sidaas muhiim dheerad ah u sii leh, ayuu yeri.
Lakiin ururada iskaashatada iyo shaqo bixyaasha ayaa arrinkan meelo kalo fog jooga. Eva Östling waxay maareeye ka tahay ururka ay ku mideysan yahiin shaqobaxiyaasha hoteelada iyo maqaayadaha Visita, shaqabixyaashan oo ah kuwo badanaa shaqaaleye dadyowga dibaddaha ka soo jeeda.
– Shaqo mshuur hooseysay waa fursad u sahleysa ruuxa dalka ku cusub soo galka suuqa shaqada Sweden. Arrinkan na mahan mid dhinayada keligood ku heshiisn karaan balse waxaa loo baahanyahay dowladda in ay soo faro geliyo, ayey tiri.
Laakiin guddomiyaha iskaashatada shaqaalaha hoteelada iyo maqaaxiyada Therese Gyovelin ayaa gud ahaan ka soo horjeeda heshiis mushaaro hooseysa oo loo hirgeliyo qaxootiga xirfaddahooda hooseyso.
– Macquul am ahan mushaaro ku dhisan haddba qofka waddanka uu ku dhashay. Qofka ama ha ka soo jeedo Damaskus ama Göteborg shaqooyinka iskumidka ah waa in ay isku mushaaro ahaadan, ayey tiri Therese Guovelin.